Amin'ny taona 2018, hameno ny toekarena misongadina vaovao ny data = Martech Zone
Amin'ny taona 2018, hameno ny toekarena misongadina eo an-toerana ny angona
Alarobia, Desambra 20, 2017 Bonnie Crater
Ny fanantenana an'ny fahaizana artifisialy (AI) manova ny zava-drehetra dia niteraka buzz be tamin'ny boriborintany tamin'ny 2017, ary hitohy amin'ny taona 2018 sy ny taona ho avy. Fanavaozana toy ny Salesforce Einstein, AI voalohany feno ho an'ny CRM, dia hanome ny matihanina amin'ny varotra fahitana tsy mbola fahita momba ny filan'ny mpanjifa, hanampy ny mpiasa mpanohana hamaha olana alohan'ny hahatsapan'ny mpanjifa azy ireo ary hamela ny marketing hamantatra ny zavatra niainany tamin'ny ambaratonga izay tsy azo natao teo aloha.
Ireo fivoarana ireo no loha laharana amin'ny fiovàna izay saika tsy azo jerena intsony: ny fisehoan'ny Toekarena fahitana. Tahaka ny nananganana ny toekarena famokarana mifantoka amin'ny famokarana ny vanim-potoana indostrialy, ny Information Age dia mitondra ny Insights Economy, miaraka amin'ny angon-drakitra manome solika. Ny fitaovana AI tsara indrindra dia afaka manova ny angon-drakitra ho lasa fahitana azo ampiharina.
Saingy zava-dehibe ny hitadidiana fa, na dia be pitsiny aza izy io, amin'ny fotony, ny AI dia programa rindrambaiko, ary raha tsy feno na tsy marina ny angon-drakitra, dia hihena ny kalitaon'ny vokatra. Mba hanatanterahana ny fampanantenan'i AI, ny mpivarotra dia mila mitady fomba hanangonana data, hampihatra fenitra, hanavao ny vaovao ary hanadio ny angon-drakitra araka izay mahamety azy.
Zava-dehibe tokoa ny fahaizana mamantatra ny kalitaon'ny angona sy manova ny angona ho fahitana. Raha tranga miseho ny Insights Economy, mazava ny solika ilaina hampandehanana azy: angona avo lenta. Mandritra ny taona ho avy, orinasa maro kokoa no hampihatra dingana efatra tahaka izao mba hahatratrarana ny kalitaon'ny angon-drakitra ilain'izy ireo hamoronana fomba fijery manova lalao:
Dingana 1: fandrindrana - Mampiasa angon-drakitra ara-tantara ny mpivarotra mba hamoronana drafitra amin'ity dingana ity, hiara-miasa amin'ny varotra hamantarana tanjona ary hamaritana ny haben'ny fifanarahana antonony, ny volan'ny firaka ary ny hafainganana ilaina amin'ny fanatanterahana ireo tanjona. Avy eo, izy ireo dia mamaritra ny tahan'ny fiovam-po mifototra amin'ny zava-bita taloha ary mamaritra izay tokony hataon'izy ireo (oh: firy ny fitarika hiteraka, ny varotra mety indrindra, sns.) Hahatratra ny tanjona ankehitriny.
Dingana 2: fanatanterahana - Amin'ity dingana ity, ny mpivarotra dia manombana ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra mba handrefesana ny fandrosoany mankany amin'ny tanjona sy ny fahitana ny fahitana. Amin'izany fomba izany dia azon'izy ireo atao ny mamadika ny angona ho lasa fahitana mba hamoronana loop feedback. Ny ohatra iray amin'izany dia ny soso-kevitra omen'ny sehatra ecommerce "mety ho tianao" ihany koa, izay havaozina rehefa mandeha ny angona vaovao.
Dingana 3: fanatsarana - Araka ny tondroin'ny anarana, ity dingana ity dia mitaky fanatsarana mitohy ny fizotrany, toy ny fizarazarana eo amin'ny marketing sy ny varotra. Rehefa tonga ny fampahalalana vaovao, ireo mpivarotra manatsara ny fizotrany dia mitarika famerenana tsara sy mamantatra ireo teknika azon'izy ireo ampiasaina hanatsarana ny vokatra. Ahitsy ny fizotrany ary refesina ny valiny.
Dingana 4: manombatombana - Amin'ity dingana lehibe ity dia manombatombana ny fandaharan'asany ny mpivarotra ary mamantatra hoe inona ny fampielezan-kevitra nahatonga ny valiny avo indrindra. Nojeren'izy ireo ny fantsona, ny fandefasan-kafatra ary ny anton-javatra hafa hamaritana ny ROI hahafahan'izy ireo mandamina fampielezan-kevitra amin'ny ho avy izay nifototra tamin'izay fomba nahomby indrindra. Ny fahalalana nangonina tamin'ity dingana ity dia avy amin'ny hevi-baovao novokarin'ny data.
Rehefa hitan'ny mpitarika orinasa maro kokoa ny fiovana mankany amin'ny Toekarena Insights, mitadiava orinasa hanombohana manangona tahirin-kevitra momba ny rafitry ny firaketana toy ny sehatra CRM ary mampihatra ireo dingana ireo. AI dia singa iray lehibe amin'ny fivoaran'ny marketing, saingy mitaky angon-drakitra tsy misy bala mba hiasa araka ny niniana, izay midika fa ny loharanom-barotra sy ny marketing dia mila loharanom-pahamarinana tokana.
Rehefa mampiasa vahaolana iraisana ny varotra sy ny marketing, dia afaka miara-miasa akaiky kokoa ireo ekipa, amin'ny fampiasana ireo dingana voalaza etsy ambony mba hampitomboana hatrany ny kalitaon'ny angona - ary hiteraka fomba fijery manandanja mihombo. Ny fahaizana maneho ny fiantraikan'ny fampielezan-kevitra sy ny fidirana amin'ny angon-drakitra amin'ny rafitra afovoany toa ny Salesforce dia manome fahatokisana ny marketing ary manatsara ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa amin'ny varotra.
Ka rehefa mipoitra ny taona 2018 dia hanohy hitady vahaolana AI ireo orinasa. Dingana iray tsara - ny zavatra azo atao miaraka amin'ny teknolojia AI toa an'i Einstein dia tena mahavariana. Fa zava-dehibe ny mahatadidy fa ny angona angovo AI. Ireo izay mahatsapa ny anjara toeran'ny data sy mampiasa paikady mahatsiaro tena toy ireo dingana efatra hanatsarana ny kalitao ireo dia hiroborobo rehefa mipoitra hatrany ny Toekarena Insights.
Tags: aifahaizana artifisialyCRMangona ho an'ny mpanjifafifandraisana amin'ny mpanjifaangona kalitaotoekarena fahitanamarketing stackvarotra sy marketingfivarotana stack
Nahazo (Mbola) Mailaka ianao: Nahoana ny faharanitan-tsaina artifisialy dia midika ho avy matanjaka ho an'ny mailaka marketing
'Ity ny vanim-potoana… mba hamaritana ny mari-pahaizana manohitra ny fironana ara-potoana